I-Zhongshan Tauras Technologies Co, Ltd, ilandela umba "wokuthatha ixabiso labathengi njengeziko kunye noxanduva kwezentlalo njengomsebenzi wayo", ikhula ngokwasempilweni kwaye iphantsi kokulima kwabo bonke abasebenzi ngobulumko babo nokubila.
Ngaphezulu kweminyaka engama-22 yophuhliso, iZhongshan Tauras inyuka ngokukhawuleza isekwe kumandla ayo aqokelelweyo, kwaye ikhula ngokuthe chu ukuya kwishishini ngokupakisha i-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye neenkonzo. Ngoku umthamo wayo we-R & D uya usomelela mihla le, kwaye amandla ayo emveliso ayakhula suku ngalunye oludlulayo, ijelo lokuthengisa likhula ngokuzinzileyo, inkonzo yalo yezobugcisa iphuculwa ngokuthe ngcembe, kwaye yonke imiba yenziwe impumelelo ebalaseleyo.
Ukujonga kwikamva, ishishini le-LED laseTshayina liya kujongana namathuba kunye nemiceli mngeni. UZhongshan Tauras uya kugcina ukwenza izinto ezintsha kwaye aqhubeke nophando kwitekhnoloji, omeleze ulawulo, akhe uphawu, emva koko enze ubukhazikhazi.
Siza kuhlala kunye kwaye sihambisane nesandla kunye nazo zonke izihlobo ukwenza ngcono ngomso.
UMongameli neGosa eliyiNtloko lesiGqeba,
Zhongshan Tauras Technologies Co., Ltd zitshintshi e zeedola imbali yamanani, ishati ukususela ekuqaleni kokuthengisa